HomeBasic Photographyဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းများ
ဓါတ်ပုံပညာကို လေ့လာခြင်းသည် အလွန်ရှည်လျားသော လုပ်ငန်းစဉ် တစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး တကယ့်လက်တွေ့ အတွေ့အကြုံတွေအတွက် အစားထိုးလို့မရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Professional အဆင့်လို့ အမည်တပ်လိုက်တဲ့ အဆင့်ရောက်အချိန်အထိ အမှားပေါင်းများစွာကို အကြိမ်ကြိမ် ကျူးလွန်ကြပါခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအမှားတွေကပဲ အမှန်ဖြစ်လာအောင် ကျွန်တော်တို့ကို သင်ပြပေးခဲ့သလို နောက်ထပ်လမ်းမှားကို မလုပ်မိအောင် သွန်သင်ပေးခဲ့တတာပါ။
ခင်ဗျားက လူသစ်ဆိုရင်တော့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ လမ်းအရှည်ကြီးတစ်ခု ရှေ့မှာရှိနေနိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့်လည်း ခင်ဗျားအရှေ့ကဦးဆောင်သွားနေသူတွေရဲ့ အမှားတွေကို သင်ယူပြီး လမ်းကြောင်းအရှည်ကြီးကို အမြန်ဖြတ်သန်းလို့ရတဲ့ ဖြတ်လမ်းအချို့တော့ ရှိပါတယ်။ Professional အဆင့် အရည်အသွေးရှိတဲ့ ပုံရိပ်တွေရဖို့ဆိုတာ အခုချိန်မှာ လွယ်ကူလာပါပြီ၊ DSLR ကင်မရာတွေ ပေါများလာခြင်း၊ ဆော့ဖ်ဝဲတွေကောင်းလာခြင်းနဲ့ အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ plugin တွေက အလုပ်အများကြီးကို သက်သာအောင်ကူညီပေးနိုင်တာ စသဖြင့် အကြောင်းအရာတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
Professional အဆင့် လမ်းညွှန်ချက် အနည်းငယ်က သင့်ရဲ့ လမ်းကြောင်းအစမှာ အသုံးပြုနိုင်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ အကြံပေးချက်တွေကို သေချာ ဂရုစိုက်ပြီး သင်ယူသွားရင်တော့ သင်လိုချင်တဲ့ Professional အဆင့်ကို သင်ထင်ထားတာထက် ပိုပြီး အချိန်တိုအတွင်းမှာ ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ Google အသုံးပြုဖို့ မကြောက်ပါနဲ့
တခါတလေမှာတော့ သင့်အတွက်နေရာတခုရဖို့ကြိုးစားရင်း အကူအညီလိုအပ်တာကို သင်ကိုယ်တိုင် ဝန်ခံဖို့ ဝန်လေးကြပါတယ်။ ခင်ဗျား ဓါတ်ပုံသင်တန်းတို တစ်ခုပြီးမြောက်ချင် ပြီးမြောက်ခဲ့မယ်၊ ကိုယ့်ဖာသာ ဓါတ်ပုံတစ်ချို့ ရိုက်ဖူးခဲ့မယ် ဒါမှမဟုတ် သင့်မှာ သိသင့်တာတွေအကုန်လုံးကို သိပြီးသားလို့ ထင်မိကောင်းထင်မိနေနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ သင်တစ်ခုခုကို မသိဘူးဆိုတာသိလာရင် အမှားတစ်ခုကျူးလွန်ပြီး သင်သိသလိုဟန်ဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်။
လူတွေက အရင်တုန်းကပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အခုချိန်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိစ္စတစ်ခုခု နားမလည်သေးတာကို လက်မခံတတ်ကြဘူး။ တကယ်လို့ သင့်ကင်မရာမှာ ပြဿနာရှိလို့ ထွက်လာတဲ့ နံပါတ်မျိုး တစ်ခုမှမမြင်ဖူးဘူး ဆိုကြပါစို့၊ လေ့လာလိုက်ပါ။ သင်တာခါမှ မရိုက်ဖူးသေးတဲ့ အနေအထားကို ဓါတ်ပုံရိုက်တော့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တခါမှမကြုံဖူးတဲ့ ကိစ္စမျိုးကြုံလာရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် Google မှာ ကိစ္စတော်တော်များများအတွက် အဖြေရှိပြီးသားပါ။ ဥပမာ ဘောလုံးပွဲလိုမျိုး သို့မဟုတ် ဖက်ရှင်ရှိုးလို ပွဲတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ setting တွေအတိအကျကို web site တော်တော်များများမှာ ဖော်ပြထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒီ ကျွမ်းကျင်သူတွေရဲ့အဆင်သင့် အကြံပေးချက်တွေရယူပြီး သင်လိုချင်တာကို ချက်ချင်း ရယူလိုက်ပါ။
သင်တစ်ခုခုကို မသိဘူးလို့ ဝန်ခံဖို့ကို မကြောက်ပါနဲ့၊ ချက်ချင်းပဲ လေ့လာလိုက်ပါ။ အစမ်းလုပ်ကြည့်တာ၊ ဒုက္ခရောက်ပြီးမှသိလိုက်တာထက် ပိုမြန်တဲ့ နည်းလမ်းနဲ့ သင်လိုချင်တာကို ရရှိနိုင်ပါတယ်။
၂။ သင့်ကင်မရာအကြောင်းကို သိပါစေ
ကင်မရာတစ်လုံး လက်ထဲမှာ ပိုင်ဆိုင်လာပြီဆိုတာနဲ့ ဒီကင်မရာကို အချိန်တချို့ပေးပြီး သင့်အနေနဲ့ လေ့လာသင့်ပါတယ်။ အတွေအကြုံရှိတဲ့ ဓါတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့င်မှ ကင်မရာမော်ဒယ်အသစ်ရရင် လုပ်သင့်တာပဲလေ။ Setting တွေမှာ ဘာတွေပါလဲ၊ Menu မှာ ဘာတွေရှိလဲ၊ ဒီခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်ရင် ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ စသဖြင့်ပေါ့။
သင့်ကင်မရာမှာရှိတဲ့ setting တွေက တကယ်တော့ ဘယ်အချိန်အသုံးပြုပြု အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံတွေတွေရနိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းဆွဲထားတာပါ။ ဒါကို မေ့ထားလိုက်ရင် ပိုကောင်းတဲ့ သင့်ဓါတ်ပုံတွေရဖို့အတွက် လိုအပ်ချက်တစ်ခုခုကို မေ့ထားလိုက်သလိုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကင်မရာ Manual စာအုပ်ကို သုံးပြီး တစ်ခုခုမသိဘူးဆိုရင်လေ့လာပါ။ setting အကုန်လုံးကို ဘယ်လိုပြောင်းလို့ရလဲဆိုတာ သိသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ Google ကိုသုံးပြီး သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုနားလည်အောင်လုပ်ကြည့်ပါ။
၃။ အနုပညာကို လေ့လာပါ
ဓါတ်ပုံတွေကို ကြည့်ရင်းနဲ့ ဓါတ်ပုံပညာကို နားလည်လာမယ်လို့ သင်ထင်ကောင်းထင်မိပါလိမ့်မယ်၊ ဒါပေမယ့် ဒီအမြင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ အနုပညာမှာ ဒီဓါတ်ပုံတွေထက်ပိုတဲ့ သမိုင်းကြောင်း ရှည်ကြီး ရှိထားတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့။ ပန်းချီဆရာတွေ ရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာတွေကို လေ့လာကြည့်ပါ။ သူတို့ ရဲ့ ပန်းချီကားတွေထဲမှာ ဘယ်လိုမျိုး အရုပ်တွေကို နေရာချထားလဲ? ဒီပန်းချီတွေမှာ Rule of third လိုမျိုးနည်းစနစ်တွေပြည့်နှက်နေတတ်ပြီး သူတို့ကို ဓါတ်ပုံပညာမှာ ပြန်သုံးလို့ရပါတယ်။
အလင်းနဲ့ အမှောင် ကိုသုံးပြီး မြင်ကွင်းတစ်ခုသို့မဟုတ် ခံစားမှုတစ်ခုကို ဖော်ပြရာမှာ ပန်းချီဆရာတွေက အထူးကျွမ်းကျင်ကြပါတယ်။ Photoshop စတာတွေနဲ့ ဖြတ်ညှပ်ကပ်မလုပ်ဘူးဆိုရင် ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးတာလဲ ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ၊ နာမည်ကျော် ပန်းချီကားတွေကို လေ့လာကြည့်ရင် သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင် ပုံရိပ်အတွက် တစ်ခုခုကိုလေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
၄။ တည်းဖြတ်ခြင်းကို လေ့လာပါ
ဓါတ်ပုံပညာရဲ့ ကြီးကြီးမားမား အရေးပါတဲ့ အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုက တည်းဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပြီး DSLR ကင်မရာက ထွက်လာတဲ့ ပုံတိုင်းက အကောင်းဆုံးမဖြစ်လာတဲ့နောက် အရေးပါလာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ သင် ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဘယ်ဓါတ်ပုံဖြစ်ဖြစ် မှန်ကန်တဲ့ အရောင်နဲ့ အလင်းအမှောင်ရအောင် တည်းဖြတ်တာ ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးလား? အင်တာနက်မှာ Photoshop tutorial တွေများကြီရှိပြီး ခင်ဗျားကို ကူညီနိုင်မှာပါ။
အချိန်ပေးပြီးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ငန်း သဘာဝနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ အခြေခံတွေကိုလေ့လာလိုက်ပါ။ အလှဓါတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေက အသားအရည်ကိုလှပအောင် တည်းဖြတ်တာသင်ယူသင့်သလို၊ ဖက်ရှင်ဓါတ်ပုံဆရာတွေကလည်း အဝတ်အထည်တွေ ဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာ သင်ယူသင့် ပါတယ်။ ဓါတ်ပုံတစ်ပုံကို ပိုပြီးကျစ်လျစ်လာအောင်ပြုပြင်တာ၊ အလင်းပေးတာ၊ အမှောင်ချတာ၊ ဖိုးကပ်စ် လျော့တာ စသဖြင့် လေ့လာသင့်ပါတယ်။ကြော်ငြာဓါတ်ပုံလိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်တော့ ခြေထောက်တွေဘယ်လိုသွယ်အောင်တည်းဖြတ်တာ၊ မျက်လုံးပုံစံတွေပြင်ဆင်တာ၊ မော်ဒယ်ရဲ့ ခေါင်းနဲ့လိုက်ဖက်အောင် ဆံပင်တွေထည့်ပေးတာ စတာတွေတောင်မှ သင်ယူသင့်ပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ setting နဲ့ ရိုက်ကူးခဲ့ဖို့ကလည်း အရေးကြီးလှပါတယ်။ ဥပမယ RAW နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေမှာ တည်းဖြတ်ဖို့အတွက် ပိုပြီးပြည့်စုံတဲ့ အချက်အလက်တွေပေးနိုင်ခြင်း၊ ISO နည်းပါးတဲ့အတွက် ပုံတွေကြည်လင်ခြင်း စတာတွေကြောင့် ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ပုံတစ်ပုံရဖို့ ပိုသေချာပါတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ exposure နဲ့ ရိုက်ခဲ့ရင် နောက်ပိုင်း တည်းဖြတ်တဲ့အခါမှာ အချိန်သိပ်မကုန်တော့ပါဘူး။
၅။ လေ့ကျင့်ပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ၊ လေ့ကျင့်ပါ
လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုမရှိဘဲနဲ့တော့ ဘာကိုမှ သင်ယူတတ်မြောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်လိုအပ်တာကို ရဖို့ အချိန်ပေးပြီးတော့ နည်းစနစ်တွေကို လေ့ကျင့်ပါ။ တကယ်လို့ မော်ဒယ်ရှာမရရရင် အိမ်ကကြောင်ကို မော်ဒယ်လုပ်ခိုင်းပြီးလေ့ကျင့်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင် မှန်အသုံးပြုပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြင့် သင့်အသားအရေကို တည်းဖြတ်ကြည့်ပါ။ ထမင်းစားပွဲပေါ်မှာ တခုခုကိုတင်ပြီး still ဓါတ်ပုံပညာကိုလေ့လာပါ။ အင်တာနက်က အလကားဒေါင်းလုပ်ပေးဆွဲတဲ့ stock ဓါတ်ပုံတွေကို ယူပြီး တည်းဖြတ်ကြည့်ပါ (stock ဓါတ်ပုံအများစုက တည်းဖြတ်ပြီးသားဖြစ်နေပေမယ့်လည်း)။ နေ့စဉ် ဓါတ်ပုံရိုက်ပါ။ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို ဘာဖြစ်ဖြစ်ရနိုင်သလောက်ယူဖို့က အရေးကြီးပါတယ်၊ ဒါတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ရင်တော့ ဘယ်အမှားမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်သင့်တယ်ဆိုတာ သင့်အနေနဲ့ သိရှိပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ကိုးကား။ ။Rhiannon D’Averc ရဲ့ Pro Tips for Beginner Photographers ကို ဘာသာပြန်ပါသည်။
3 Comments on ဓါတ်ပုံဝါသနာရှင်တွေအတွက် ဓါတ်ပုံပညာရှင်တွေရဲ့ လမ်းညွှန်ချက်ကောင်းများ